Ciidamada Itoobiya iyo kuwa DKMG ah oo gudaha u galay Deg Xudur – SBC
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa DKMG ah oo gudaha u galay Deg Xudur
Posted by Webmaster on March 22, 2012 Comments
Wararka ka imanaya gobolkaasi Bakool ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaali ah oo ka tirsan DKMG ah ay la wareegeen gacan ku heynta deegaanka Xudur ee Gobolkaaso.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada Dowlada iyo Kuwa Itoobiya ay magaalada Galeen iyadoo aan dhicin wax dagaal ah, maadaama ay isaga bexeen halkaasi xoogaga xarakada Alshabaab oo sanadihii ugu dambeeyay ka talinayay.
Dadweynaha ku dhaqan magaaladaas ayaa saxaafada u sheegay in wadooyinka waaweyn ee magaalada lagu arki karo ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo dhex lugeynaya halka qaarkoodna ay ku gooshayaan gaadiidkoodii dagaal iyagoona difaacyo ka sameysanaya afaafka hore ee magaalada.
Shalay ayay aheyd markii uu goboku ku dhexmaray dagaal ciidamadan iyo kuwa Alshabaab kaasi oo sida la rumeysanyahay sababay ka bixitaanka ciidamada Shabaabka magaalada Xudur.
Waxay ku soo aadaysaa ka bixitaanka xarakada Alshabaab ee Xudur iyo soo gelida ciidamada Itoobiya iyo weliba kuwa DKMG ah bil ka hor markii ciidamada Itoobiya iyo kuwa DKMG ah ay la wareegeen magaalada xarunta u ah gobolka ay Bakool deriska yihiin ee Baay waa baydhabee.